Uku ndiko kugovera kunokurudzirwa neFSF | Linux Vakapindwa muropa
Chizvarwa chekuparadzirwa kutsva kweGnu / Linux kwakaita kuti vashandisi vazhinji vafarire uye vadzidze nezveLinux uye Mahara Software. Asi ichokwadi kuti vazhinji vavo, kana vasiri vese, havana kusununguka.
Kugoverwa kwakawanda kune madhiraivha edzimhosva kana chimwe chirongwa chisina rezinesi yeGNUNaizvozvo, iyo Mahara Software Foundation kana Mahara Software Foundation yakasarudza kugadzira webhusaiti uko kupihwa kwayakagamuchirwa semahara kwakatsanangurwa, kugoverwa mahara zvachose.
Iyo rondedzero yemahara yemahara yekuparadzira inoshamisa uye inobata maziso, nekuti hapana chero chikuru chekugovera chiri mahara. Sezvinei, Debian, Slackware, Gentoo kana Arch Linux inoonekwa neFSF pachayo sekupararira-kwemahara. Muchokwadi, ini ndinorangarira kuti paive nekumwe kukakavara naDebian nekuti mutsauko uripo pakati pekusununguka uye kusave wakasununguka kwaive kwakavakirwa pane repositori inogona kubviswa nevashandisi. Iwo anozivikanwa emahara ekugovera ndeaya: gNewSense, Ututo XS, Blag, Dragora, Trisquel, Dynebolic, GuixSD, Musix, Parabola uye PureOS.
PureOS y gNewSense Idzo ndidzo migove miviri yakavakirwa paDebian asi iyo inobvisa iyo inonetsa repositi uye zvakare inowedzera zvakavanzika uye ekuchengetedza maturusi.
Trisquel Ndiyo chete yekuparadzira yemahara inoenderana neUbuntu uye XS ndeimwe yekutanga kupihwa pachena uye ndiyo chete yakavakirwa paGentoo. Mufananidzo iko kugovera kunobva paArch Linux uye blag iyo yakafanana asi yakavakirwa paFedora.
Zvinotoshamisa kuti kune zvikamu zviviri zvakapihwa kune nyika yekurira uye odhiyo kurongedza. Izvi ndizvo music y Dynebolic.
Chero chavo iwo akakodzera kuyedzwa asi pachezvangu ndaisazoshandisa. Iwo ese mapurojekiti makuru, asi mazhinji acho anosiiwa uye izvo zvinoreva kushomeka kwekuchengeteka. Zvichida maviri akakwira-kusvika-kudhara ekuparadzira emahara ndiParabola uye PureOS, asi mamwe akaita saTrisquel kana Ututo XS haana kugadziridzwa kwemakore.
Uye kana uine kusahadzika, unogona kugara uchienda iyo yepamutemo FSF webhusaiti, yemahara webhusaiti ine ruzivo rwese rwaunoda kuti uwane yakasununguka yeGnu / Linux kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Uku ndiko kugovera kunokurudzirwa neFSF
Trisquel, maererano newebsite yepamutemo, vhezheni 8 yave kuda kuburitswa, meseji iri kubva musi wa11 / 12/2017, saka haifanire kusiiwa zvakadaro.
Trisquel yakavakirwa paLTS shanduro dzeUbuntu, saka inogashira yakajairika kuchengetedzeka zvigamba. Chirongwa hachina kufa, vanoenderera mberi nekusimudzira nenharaunda yavanayo, kunyangwe iri diki, ichiri kushanda.
Pane dzakawanda nguva iyo fsf haitsigire kugovera uko pasi pesarudzo yemushandisi kunogona kunyorwa chete yemahara software nekuti zvakare inosanganisira isiri-yemahara software mune avo ekuchengetera, asi pamberi izvo zvinogona kutaurwa kuti munhu anogona kuve nekuparadzirwa senge Debian kana Gentoo pasina chinhu chepropetiary software asi iri sarudzo, mune zvekugovera zvakagamuchirwa neiyo fsf hapana musuwo wakazaruka wekushandisa software yepamutemo.
Pindura kune elc79